मलाई डीभी परेछ !~~~~~~~~~~~~~~~~~हुर्रे ~~~~~~~~~ | नेपालको सम्झना
Browse » Home » रोचक जानकारी » मलाई डीभी परेछ !~~~~~~~~~~~~~~~~~हुर्रे ~~~~~~~~~
मलाई डीभी परेछ !~~~~~~~~~~~~~~~~~हुर्रे ~~~~~~~~~
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकै ठेगानाजस्तो बनाएर भाषासमेत आकर्षक बनाई यस्ता इमेल आउने गरेका छन् । नबुझी पैसा तिर्दा धेरै ठगिएका पनि छन् ।
श्री बाबुराम शर्मा
डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) प्रोग्रामका १ करोड २१ लाख निवेदकमध्ये कम्प्युटर र्‍यान्डम ड्रबाट छानिएका ५० हजार विजेतामा तपाईं पनि पर्नुभएको छ । डीभी अमेरिकी कंग्रेसद्वारा स्विकृतप्राप्त स्थायी आवास कार्ड उपलब्ध गराउने चिट्ठा कार्यक्रम हो । यसलाई ग्रिन कार्ड लोटरी पनि भनिन्छ ।
स्वीकृत मिति: बुधबार, २० जुलाई, २०११, अपराह्न ०१:४८:१४
विजेता: बाबुराम शर्मा
डीभीबाट तपाईंले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका अवसरजस्ता अमेरिकी स्थायी आवासका सम्पूर्ण सुविधा र फाइदा पाउनु हुनेछ । एकपटक यो पाएपछि तपाईं जहिले सुकै अमेरिका आउन वा यात्रा गर्न सक्नु हुनेछ । यो भिसालाई १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।
अमेरिकी सरकारले तपाईंलाई स्वास्थ्य बीमा, आवास सुविधा, कामको ग्यारेन्टी (तपाईंको दक्षता मिल्दो ता कि अमेरिका आएको साता नै काम सुरु गर्न सक्नुहोस्) र शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने छ । अमेरिकी कलेज वा विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरणसमेत हुनेछ र तपाईंले पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुनेछ । यसबारे थप जानकारीका लागि हेर्नुस्- एजुकेशनयुएसए डट स्टेट डट जीओभी
प्रोसेसिङ फी : ८१९ अमेरिकी डलर
डीभीमा सहभागिता नि:शुल्क भए पनि प्रत्येक विजेताले ८१९ डलर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यो भुक्तानी पाएपछि ग्रिनकार्ड ग्यारेन्टी हुन्छ । परिवारका अन्य सदस्य (श्रीमती/श्रीमान्, दाजु/भाइ, दिदी/बहिनी, छोरा/छोरी आदि) ले पनि एकै पटक भिसा पाउने छन् तर उनीहरूको छुट्टाछुट्टै ८१९ डलरका दरले शुल्क तिर्नुपर्नेछ । बालबालिकाका लागि कुनै छुट छैन ।
रकम पठाउने विधि
शुल्क वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरबाट अमेरिकाको बेलायतस्थित दूतावासमा पठाउनु पर्ने छ । रकम अमेरिकी डलर वा त्यो बराबरको आफ्नो देशको मुद्रामा जम्मा गर्न सकिनेछ ।
आफ्नो परिचयपत्रसहित वेस्टर्न युनियन गएर बेलायतस्थित अमेरिकी दूतावासका निम्न प्रतिनिधिको ठेगानामा रकम पठाइदिनु होला-
नाम- पउल होलिङ्स
ठेगाना- २४ ग्रसभेनर स्क्वायर
लन्डन, डब्लु१ए १एई
भुक्तानी पठाएपछि निम्न चरणहरू पूरा गर्नु होला-
क) वेस्टर्न युनियनको रसिदको स्क्यान कपीमा इमेल गर्ने
ख) त्यही इमेलमा निम्न विवरण पठाउने-
१. पैसा पठाएको कन्ट्रोल नम्बर
२. पठाउनेको सही नाम
३. पठाउनेको सही ठेगाना
४. पाउनेको सही नाम
५. पठाएको रकमको मात्रा
रकम पठाएको ७२ घन्टाभित्र अन्तिम अन्तर्वार्ताको मिति र समयसमेत निर्धारण गरेर (दुई दिनभित्रै हुने) तपाईंलाई जानकारी गराइनेछ । अन्तर्वार्तामा सफलतापछि तपाईंले कागजपत्र र यात्राबारे जानकारी पाउनुहुनेछ । अन्तर्वार्ताले भिसा नपाउने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन ।
नोट- शुल्क भुक्तानी अगस्ट ४, २०११ भित्र भइसक्नुपर्नेछ । तपाईंलाई भुक्तानीको अन्तिम मितिसम्म नकुर्न हामी जोडदार सिफारिस गर्छौं । किनकि, धेरै मागले गर्दा सिस्टमले झन् ढिलाइ गर्न सक्छ ।
भुक्तानी प्राप्त भएपछि यो पत्रको एक प्रति तपाईंलाई हुलाकबाट समेत पठाइनेछ ।
डीभी विजेता भए पनि तपाईंको केस नम्बर/कन्फर्मेसन नम्बर भुक्तानी पाएपछि मात्र उपलब्ध गराइनेछ । कृपया यस्ता नम्बर सोधेर सम्पर्क गर्ने कष्ट नगर्नु होला । तपाईंलाई अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न जरुरी नै पर्‍यो भने आफ्नो नामसहित यो ठेगानामा लेख्नु होला:
एउटा साथीलाई यस्तै इमेल आएछ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्ट) को ठेगानाबाट पठाएको त्यो इमेल सरसर्ती हेरेपछि हतार-हतार श्रीमतीलाई देखाएछ । डीभी परेको खुसियालीमा दुवै मिलेर अफिसका सबैलाई लड्डु बाँडेछन् ।
'हेलो, आमा !' श्रीमतीले माइतीमा फोन गरेर भनिछन्, 'ज्वाइँलाई डीभी पर्‍यो नि !'
'हो र ?' आमा हर्षले गदगद भइछिन्, 'भाग्यमानी रैछेस् छोरी तँ त !'
'हजुरहरूकै आशीर्वादले त हो नि', छोरीले भनिछन्, 'पाँच वर्षदेखि भरेको, यसपालि चाहिँ बल्ल पर्‍यो ।'
बुवाले खबर सुन्नासाथ भोलिपल्टै नातिनातिनासहित आउन निम्ता गरेछन् । खसी काटेर भोज गरेछन् ।
'फलानाका छोरी-ज्वाइँ त अमेरिका जाने भएछन् !' गाउँभरि हल्ला चलेछ । अमेरिका जाने 'भाग्य भएका' ज्वाइँ कस्ता रहेछन् भनेर हेर्न धेरै छरछिमेकी आएछन् पनि ।
कतै नबुझी हतार-हतार उनीहरूले वेस्टर्न युनियनबाट पैसा पठाएछन् । ७२ घन्टा होइन, ७२ दिन बित्दा पनि उत्तरै आएनछ । विचरा ! उनीहरूको त्यत्रो खुसी, भोज-भत्तेर, सपना सबै एउटा ठगले रित्याइदिएछ ।
मलाई यस्ता इमेल कति आउँछन् कति ! कहिल्यै वास्तै गर्दिन । नहेरी डिलिट गरिदिन्छु । किनकि, न मैले डीभी भरेको छु, न त त्यसमा चासो नै छ । हजारौं डलर उपहार पर्‍यो भन्ने खालका इमेल पनि उत्तिकै आउँछन् । यस्ता इमेल पठाएर सकेसम्म पैसा, नत्र क्रेडिट कार्ड नम्बर वा इमेलको पासवर्ड मात्र भए पनि लिइछाड्ने गिरोहले धेरैलाई दु:ख दिएको छ ।
केही दिनअघि विराटनगरबाट कान्तिपुरकै रामबन्धु पौडेलको फोन आयो ।
'डीभीले मलाई झन्डै डुबायो नि !' उहाँले भन्नुभयो, 'तपाईंले लेखिदिनु पर्‍यो ।'
'के भयो ?' मैले सोधें ।
'झन्डै पैसै पठाएको', बन्धुजीको उत्तर थियो, 'धन्न त्यतिबेलै कान्तिपुरमा डीभीको नाममा ठगीमा पर्न सकिएला भन्दै सावधान गराएको अमेरिकी दूतावाससँग सम्बन्धित समाचार आयो र बचेँ ।'
जति इमेल पाइएका छन्, सबैमा भाषा उस्तै छन् । मलाई आएका दुवै इमेलमा प्रोसेसिङ फी ८१९ डलर छ भने रामबन्धुसँग ६८० डलर मागिएको छ । तीनवटै इमेलमा पैसा पठाउन बेलायतस्थित अमेरिकी दूतावासको ठेगाना दिइएको छ (जुन वास्तविकसँग मिल्छ) । तर, सम्पर्क व्यक्ति तीनवटा इमलेमा फरक छन्- पउल होलिङ्स, पिटर ब्लेम्याटल र माइक निकोल्स (ती नामका अधिकारी सम्भवत: त्यहाँको अमेरिकी दूतावासमा छैनन् होला) ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकै ठेगानाजस्तो बनाएर भाषासमेत आकर्षक बनाई यस्ता इमेल आउने गरेका छन् । नबुझी पैसा तिर्दा धेरै ठगिएका पनि छन् । खोज्ने हो भने सम्बन्धित इमेल बनाएका इन्टरनेट साइटका सञ्चालक पत्ता लगाई कारबाही गर्न गाह्रो छैन । अमेरिकी सरकारले आफैं लन्डनस्थित आफ्नो नियोगलाई प्रयोग गरी यसको छानबिन गराउन सक्छ । यसका लागि वेस्टर्न युनियनमार्फत् रकम पठाएर लिन को जान्छ, हेर्न सकिन्छ । यसो गर्न किन पनि जरुरी छ भने यस्ता धन्दावालले अमेरिकी सरकार र दूतावासलाई मुछेका छन् । त्यही विश्वासमा धेरैजना डुबेका छन् ।
इन्टरनेटमा हेर्दा डिप्लोम्याट्स डट कम भन्ने साइट वल्र्ड डट कम मिडियाको एउटा प्रकाशन रहेछ । यसका अरू प्रकाशन एसिया डट कम, पपस्टार डट कम, डक्टर डट कम, कपल डट कम, इमेल डट कम, पेरिस डट कम, न्युयोर्कइन्फो डट कम आदि छन् । त्यस्तै युएसए डट कम अमेरिकासम्बन्धी जानकारीमूलक साइट हो । अर्को इमेल पठाउने साइट भने नेपालमा खुलेन । अमेरिकी नियोगहरूले चाहे भने अझ बढी पत्ता लगाउन सक्छन् र धेरैलाई ठगिनबाट जोगाउन सक्छन् ।
तपाईंलाई त कतै यस्तो डीभी परेको छैन ? अनि, अमेरिका जाने आसमा हतार-हतार डलर त पठाउनुभएको छैन ?
कान्तिपुर बाट साभार ( अरु कसैको नाममा मेरो नाम राखेको छु अन्यथा नलिनु होला )
Posted by नेपालको सम्झना at 4:05 AM
0 comments to “मलाई डीभी परेछ !~~~~~~~~~~~~~~~~~हुर्रे ~~~~~~~~~”